Umklamo weBlackmagic Uzofaka Isishintshi Esisha Kakhulu e-NAB Show New York - I-NAB Show News ngu-Broadcast Beat, Umsakazi Osemthethweni we-NAB Show - I-NAB BONISA I-LIVE
Ikhaya » Okufakiwe » Umklamo WeBlackmagic Uzofaka iSishintsha Esisha Kakhulu e-NAB Show New York
Umklamo WeBlackmagic Uzofaka iSishintsha Esisha Kakhulu e-NAB Show New York
Ngo-Okthoba ngqo ekhoneni, I-NAB Bonisa iNew York ilungiselela ukuba ngumcimbi othokozisayo wezobuchwepheshe nabachwepheshe bezokuxhumana abakhona. I-Blackmagic Design aziwa ngokwakha imikhiqizo ephezulu kakhulu yokuhlela ividiyo, abalungisa imibala, amakhamera wefilimu wedijithali, abaguquli bevidiyo, ukuqashwa kwevidiyo, ukushintshwa kokukhiqizwa okubukhoma, ama-disk rekhoda, ama-routers, ama-waveform ama-waveform, kanye nezikena zefilimu zesikhathi sangempela zefilimu yesici, ukukhiqizwa okwenziwa ngemuva kanye nezimboni zezokusakaza zethelevishini. Ngo-Okthoba olandelayo, bazofaka iswishi sabo esisha kunazo zonke, i I-ATEM Constellation 8K at I-NAB Bonisa I-New York.
I-ATEM Constellation 8K iyi- I-Ultra HD okokushintshwa kokukhiqizwa okubukhoma nge-4 M / Es, okokufaka kwe-40 x 12G ‑ SDI aux, imiphumela ye-24 DVEs, i-12 Keyers, i-4 media media, i-16 multiviewers, 4 SuperSource kanye nokuguqulwa kwamazinga kuyo yonke i-SDI. Ukuhlanganisa lezi zici kusekela ukusebenza kwesishisi esinamandla kakhulu se-4K lapho kushintshwa ku-2K. I-ATEM Constellation 8K ine-talkback eyakhelwe ngaphakathi kanye nesiteshi se-8 Isihlanganisi somsindo we-Fairlight nge-EQ namandla, okungavumela umsebenzisi ukuthi axhuma futhi asebenzise i-audio ephelele ye-Fairlight audio. Ngokungeziwe ekushintsheni kwe-8K, i-ATEM Constellation 8K isebenza njengokuthuthuka okuhle kwe I-ATEM Television Studio.
I-ATEM Constellation 8K Ine-Multiview futhi Ingasetshenziselwa Imicimbi Ebukhoma
Akukona ukuthi ukusho ukuthi indlela esheshayo yokukhiqiza uhlelo kwenziwa ngomcimbi obukhoma, futhi i-ATEM Constellation 8K yenza kuphela lokho kube ngokoqobo. Okokufaka okuningi kwe-ATEM Constellation 8K kuyakuvumela ukuthi kusetshenziswe kumakhonsathi, emicimbini yomculo, nasemicimbini yezemidlalo. Leli nani elikhulu lokufakwayo nama-DVE amane kungazuzisa ngisho nemidlalo ebukhoma lapho izingoma zezakhiwo eziningi zingakhiwa ukumboza isenzo.
I-ATEM Constellation inkulu kakhulu, futhi yayo HD futhi I-Ultra HD iswitshi ingahlanganiswa ukusebenza nge-8K yendabuko. Le nhlanganisela inika kuphela umsebenzisi amandla we-40 ozimele we-12G ‑ SDI okokufaka uma usebenza nomunye HD or I-Ultra HD. Noma kushintshwa ku-8K, lokhu okufakwayo kwe-40 kungaguqula ku-10 Quad Link 12G ‑ SDI 8K okokufaka ngokuguqula okuphezulu nokuwela. Lokhu kusho ukuthi umsebenzisi angashintshela ku-720p, 1080p, 1080i, I-Ultra HD namazinga wevidiyo we-8K ngokushesha. Umsebenzisi angathola futhi i-4 ezimele I-Ultra HD ama-multiviews anekhono lokuguqula libe yi-8K ephelele i-multiview. Ngisho nokhiye, i-DVE, i-Super Source, nokhiye osezansi komfula bangashintshela ku-8K yendabuko!
Ukuba ne-multiview ye-8K eyakhelwe ku-ATEM Constellation kuvumela umsebenzisi ukuthi aqaphele imithombo eminingi eceleni kwemiphumela ye-4 ezimele ye-multiview engenziwa ngokwezifiso noma iguqulwe ibe yisixazululo esigcwele se-8K multiview lapho ishintshelwa ku-8K. Konke okokufaka kwangaphandle nayo yonke imithombo yangaphakathi kungahanjiswa kunoma yikuphi ukubukwa futhi ama-multiviews ngamanye angasetwa ngokuzimela ku-4, 7, 10, 13 noma ukubukwa okufanayo kwe-16. Ukubuka ngakunye kunesimo esikrinini kufaka ilebula yangokwezifiso, amamitha we-V kanye nokwejwayelekile. Ukwesekwa kwemiphumela emine ye-12G ‑ SDI multiview HD futhi I-Ultra HD kufika ku-2160p60, kuze kufike ku-4320p60 nge-Quad Link 12G ‑ SDI lapho kushintshwa ku-8K.
I-ATEM Constellation 8 K Yandisa Amandla Okusakaza Athuthukile
Idizayini ye-XEMUM ye-XEMUM ye-XEMUM ye -UMEMCK i-ATEM ivumela ukusebenza kwesishisi sokusetshenziswa okuphuthumayo, futhi kufakiwe i-LCD enkulu evumela umsebenzisi ukuthi abone ukuphuma kohlelo futhi aguqule izilungiselelo zesishintshi ngamamenyu okusikrini. Ngemuva kweswishi kunokokufaka okukhulu kwe-8 x 2G ‑ SDI, ukuphuma kwe-40 x 12G ‑ SDI aux, kanye nokulalelwayo okulinganiselayo, i-Ethernet, i-RS ‑ Ukulawulwa kwe-24 kanye nokufakwa okwengeziwe kwe-Madi yedijithali eyengeziwe kusixhumi somsindo we-Fairlight yize kuyi-12RU kuphela. usayizi.
I-ATEM Inikeza Izinguquko Eziningi
I-ATEM Constellation 8K ifaka izinguqulo zezindabuko ezisezingeni eliphakeme ze-8K ezingasetshenziswa ngokwezifiso ngokulungisa amapharamitha afana nesikhathi sawo, umbala womngcele, ububanzi bomngcele, isikhundla nokuqondisa. Lokhu kuguqulwa kufaka phakathi:
Izinguquko zingabomdabu be-8K ngokugcwele futhi umsebenzisi angathola izinguquko ezijabulisayo ze-DVE, ezilungele ukusula kwemidwebo kanye nezitaki lapho zisetshenziswa nabadlali bezindaba bangaphakathi. Ukuqeda amaphutha, i-ATEM Constellation 8K inesici soguquko lokuhlola kuqala esinika abasebenzisi ithuba lokuhlola izinguquko ngaphambi kokuzibeka emoyeni!
I-Blackmagic DesignI-ATEM Constellation 8K ingukuqala kokukhiqizwa okubukhoma okugxile kumkhiqizo womsindo wobuchwepheshe. Ingaxhunywa kukhonsoli efanelekile yokuxuba ukukhanya, futhi ingasetshenziswa ngisho nokuxuba umsindo kusuka kumamakrofoni wokufaka we-analog okufakwayo okusetshenziselwa izwi ngaphezulu.
I-NAB Bonisa INew York ingumbutho ofanele wabachwepheshe bezindaba, wokuzijabulisa nezobuchwepheshe. Izokwenzeka ngo-Okthoba 16-17, 2019. The I-Blackmagic Design Umbukiso uzobanjelwa emadokodo N403.
Ukubhalisela I-NAB Bonisa I-New York, ke Chofoza lapha futhi ufunde kabanzi mayelana I-ATEM constellation 8k, bese ubheka www.blackmagicdesign.com.
I-2016 NAB Bonisa I-2016 NAB Bonisa i-Job Fair 2016 NAB Bonisa Izindaba 2019 I-ATEM Constellation I-ATEM Constellation 8K I-Blackmagic Design I-Broadcast Beat Awards Sakaza i-Beat Magazine Injini yokusakaza Ukusakaza Ubuchwepheshe Umsakazo Wesivumelwano Umhlangano Wokusakaza I-Multiview I-NAB I-NAB 2015 I-NAB 2016 I-NAB Bonisa iNew York NAB16 nabshow	2019-09-30
Ngaphambilini: ICarrec Iqhubeka Ngokucindezela Kokubambisana Kweqiniso kwe-IP Kudlula Ukuhlolwa Kwamuva kweJT-NM
Olandelayo: I-Private Multi-Media Studio Efuna Amaphakathi